‘कांग्रेस अब पनि नसुध्रिए समाप्त हुन्छ’- गगन थापा -
‘कांग्रेस अब पनि नसुध्रिए समाप्त हुन्छ’- गगन थापा
प्रकाशित मिति : २०७८, २१ मंसिर मंगलवार
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता गगन कुमार थापाले आफ्नो पार्टी अब पनि नसुध्रिए समाप्त हुने बताएका छन् । मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै नेता थापाले कांग्रेस नसुध्रिए समाप्त भएर जाने बताएका हुन् ।
उनले पार्टी सकिए आफ्नो र पार्टीका नौ लाख कार्यकर्ताहरुको भविष्य पनि समाप्त हुने बताए । नेता थापाले नौ लाख पार्टीका कार्यकर्तालाई कांग्रेसको रुख चिन्हमा मत नहाले कांग्रेस सकिन्छ भन्ने बोध गराए मात्रै विजयी बन्ने बताए ।
उनले भने, ‘नेपाली कांग्रेस चुनाव जित्छौँ भनिरहँदा आम जनताले कांग्रेसले किन जित्नुपर्छ भन्ने कुराको बोध गराउन आवश्यक छ । चुनावभन्दा परको अवस्था हेरेर अघि बढे मात्रै कांग्रेस सबल बन्छ ।’ उनले भने, ‘कसले बिगार्‍यो कांग्रेस भन्ने मात्रै होइन, कसले
सुधार्छ कांग्रेस भन्ने मात्रै होइन, किन सुधार्ने कांग्रेस ? कांग्रेस सुध्रने भने के हुन्छ ? सुध्रेन भने कांग्रेस सकिन्छ । कांग्रेस सकियो भने के हुन्छ ? सकियो भने म नेपाली कांग्रेसको कार्यकर्ता भएकोले गर्दा मेरो सबै कुरा पार्टीसँग छ।
मलाई चिन्ता लाग्ने सबै कुराहरु मेरा कुराहरु भए ।हामी चुनाव जित्नुपर्छ भनेर लाग्नुभन्दा एउटा नागरिकले कांग्रेस किन सुध्रिनुपर्छ भन्ने कुरा थाहा पाउनु ठूलो कुरा हो ।’ नेता थापाले यो महाधिवेशनपछि नेपाली कांग्रेसको सदस्यता कहिल्यै नलिएको,
सदस्य कहिल्यै नभएको १५ लाख नयाँ मान्छेलाई नेपाली कांग्रेससँग जोड्नुपर्ने बताए । पार्टीमा म्यासेज र म्यासेन्जर दुवै आवश्यक रहेको बताउँदै नेता थापाले पार्टीमा नेता, कार्यकर्तालाई मात्र नभइ अन्य नागरिकहरुलाई जोडिने वातावरण सिर्जन गर्नुपर्ने
‘ओमिक्रोन भाइरसले कोभिड अन्त्य गराउँछ भन्नेमा
गोलाप्रथाबाट प्रदेश १ मा गोपालकुमार बस्नेत
प्रदेश १ बाट राष्ट्रियसभामा एमालेका सोनाम गेल्जेन शेर्पा निर्वाचित
‘राष्ट्रियसभाको निर्वाचनको सबै सिटमा गठबन्धन विजय हुनेछ’- माधव नेपाल
चुनाव पछि धकेल्ने प्रचण्ड र माधव नेपालको रणनीति
‘ओली गुटले भत्काउन मात्रै जानेको छ’- माधव नेपाल
‘तीन तहको चुनाव एकै पटक गरौं’- नेता पोखरेल